सांसदको जिज्ञासा : नेपाली भूमिमा नेपाली नोटको कारोबार हुने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
सांसदको जिज्ञासा : नेपाली भूमिमा नेपाली नोटको कारोबार हुने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ?
साउन २९ गते, २०७६ - २०:११
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदले नेपाली भूमिमा नेपाली नोटको कारोबार हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा वैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले नेपाली भूमिमा नेपाली नोटको कारोबार नभएको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
स्नेहीले कञ्चनपुरको चाँदनी दोधार नगरपालिका भित्र भारतीय नोटको मात्रै कारोबार भएको तर नेपाली नोट नै नचल्ने अवस्था रहेको जनाएका छन् । उनले चाँदनी दोधारमा कसरी नेपाली नोटको कारोबारको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भनि जिज्ञासा राखेका छन् ।
‘कञ्चनपुरको चाँदनी दोधार नगरपालिकामा नेपाली नोटको कारोबार नभएर सबै भारतीय नोटको कारोबार हुन्छ । त्यहाँ नेपाली नोटको कारोबार हुने व्यवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?’ स्नेहीले भने ।
उनले नेपाली नोटको कारोबार हुने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
साउन २९ गते, २०७६ - २०:११ मा प्रकाशित